जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी - nepal day
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी
प्रकासन मिति : ९ पुष २०७८, शुक्रबार २२:४८
जिन्दगीमा एकपटक पुग्नै पर्ने मन्दिर सायद भन्दा खेरी हजुर हरुलाई बिश्वास लाग्दैन होला तर यस मन्दिरमा आयर मागेको वर पूरा हुने बिस्वाश गरिन्छ। बारीपारी घना जंगल ३ नदीको संगम अनि बिचमा मनै लोभ्याउने मन्दिर ।
तस्वीर हो गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ आँपचौरमा रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरको ।अहिले पनि सो मन्दिरमा गुल्मी,अर्घाखाँची बाग्लुङ,पाल्पा, प्युठान, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायत नेपालका धेरै जिल्ला हरुबाट श्रद्धालु भक्तजनहरु पुजापाठको लागी त्यहाँपुग्ने गर्दछनत्यस मन्दिरमा जे बर मागे पनि पुग्छ भन्ने जनबिश्वास रहिआएको छ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ ।
ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो म’न्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ ।
यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।
१) थाइराइड:हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको स’मस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । २) एन्जाइटी:ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ ।
यसको उच्चारणले तनाव, ड’रजस्ता स’मस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । ३) स्ट्रेस वा टेन्सन:ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ ।
यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।४) ब्लड सर्कुलेसन
:ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि स’हयोग पुर्याउँछ । यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ ।
५) स्वस्थ मुटु:दैनिक यसकाे जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ ।
यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन स’हयाेग गर्छ ।६) डाइजे शन :ओम् उच्चारणले पेटमा भा’इब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ ।
कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ ।
दुई सय मतगणना सकिंँदा गगन थापाको अग्रता, दोस्रोमा प्रदीप पौडेल नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदको मतगणना सुरु भएको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भइरहेको मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाममा गगनकुमार थापाको अग्रता देखिएको छ ।दुई सय मतगणना सकिँदा थापाको १ सय २४ मत आएको छ ।यस्तै, दोस्रोमा प्रदीप पाैडेलकाे ७३, डा.प्रकाशशरण महतको ७०, विश्वप्रकाश शर्माको ६७, डा.मिनेन्द्र रिजालको ४० र डा.राजाराम कार्कीको १ मत आएको छ ।
महामन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा समूहबाट महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल, डा. शेखर कोइराला समूहबाट डा.मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा, प्रकाशमान सिंहको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मा तथा विमलेन्द्र निधिको समूहबाट डा.राजाराम कार्की महामन्त्रीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
महामन्त्रीका ६ जना उम्मेदवारबाट दुई जना महामन्त्रीमा चयन हुनेछन् । सभापतिमा देउवा निर्वाचित भैसक्नुभएको छ भने उपसभापतिमा देउवा समूहका पूर्णबहादुर खड्का र कोइराला समूहका धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ ।
महामन्त्रीपछि सह–महामन्त्री र त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यको मतगणना गर्ने पार्टीको निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।